Tag: shanduko | Martech Zone
Wow, akadii mavhiki mashoma! Kana iwe wakacherekedza kuti ini ndanga ndisiri kunyora kazhinji, imo nekuti ini ndakatora imwe rwendo rwekuenda kuDell EMC World uko ini naMark Schaefer neni takave nerukudzo rwekubvunzurudza hutungamiriri kumakambani eDell Technology kune avo maLuminaries podcast. Kuisa musangano uyu mumaonero, ndakafamba mamaira 4.8 pazuva rekutanga uye ndakaenzana 3 mamaira zuva rega rega mushure me… uye izvo zvaive nekutora zororo nguva dzose.
Ndeapi Vatengesi Vanogona Kudzidza kubva kuna Dell's IT Shanduko Yekutsvagisa?
China, April 27, 2017 Chishanu, April 28, 2017 Douglas Karr
Dell anotsanangura Ruzivo Tekinoroji Shanduko senzira yekusimudzira ruzivo uye tekinoroji yekutaurirana kuitira kuti hupenyu hwevanhu hunyatsoita uye huve nani. Shanduko yeIT zvakare inotarisana nekuvandudza zvivakwa kuti ikurudzire kushanda zvakanaka muzvirongwa nekuda kwekudzikiswa kwekuparadzwa kwezviwanikwa. Ndanga ndichishanda naMark Schaefer nemutengi wake, Dell Technologies, pamwedzi mishoma yapfuura kutsikisa mapodcast anopa ruzivo kune vanhu vari kutyaira IT Shanduko.
Svondo, Kurume 19, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Nemakore gumi ekubatsira makambani kukura mabhizinesi avo online, isu takasimbisa maitiro anoona kubudirira. Kazhinji kazhinji kwete, isu tinoona kuti makambani anorwira nekutengesa kwavo kwedhijitari nekuti ivo vanoedza kusvetukira zvakananga mukuitwa pane kutora matanho anodiwa. Dhijitari Kushambadzira Shanduko Kushambadzira kushandurwa kwakafanana neshanduko yedhijitari. MuChidzidzo cheData kubva kuPoSource - Kuitisa Shanduko Dhijitari - dhata rakaunganidzwa kubva kune vanoita zvisarudzo mazana matatu muKushambadzira, IT, uye maOperation mapoinzi.